पृथ्वी नारायणलाई नमाने अरु कसलाई मान्ने ? Kasthamandap Daily
पृथ्वी नारायणलाई नमाने अरु कसलाई मान्ने ?
काठमाडौं । देश विदेशका विभिन्न ठाऊँमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको २९७ औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा नेशनल मुभमेण्ट र नागरिक समाजको आयोजनामा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर श्री उद्धव खरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सो कार्यक्रम भएको थियो ।